Bogga ugu weyn 20 Darawalada Uber ee Lacagta Ugu Badan Bixiya | Dawladaha Ugu Fiican
Uber uma eka inay tahay adeeg tagsi, si ka duwan adeegyada taksi -dhaqameedka, oo kaa doonaya inaad u yeerto ama joojiso baabuur. Rakaabka u baahan gaadiid waxay isticmaali karaan barnaamijka Uber ee taleefankooda casriga ah si ay u codsadaan baabuur, halka kuwa leh baabuur ay is qori karaan oo ay noqon karaan darawalo.
Rakaabka ayaa markaa kaxeeya oo u kaxeeya meeshii ay ku socdeen darawal Uber oo loo diro goobtooda.
Xaaladaha badankood, lacag caddaan ah lama huraan, habka lacag -bixinta rakaabka ee la doorbidayo ayaa loo adeegsan doonaa in lagu hawlgeliyo bixinta isla markiiba.
Dhanka kale, maqaalkan waxaa ku jira gobollada leh darawalada uber ee ugu mushaarka badan.
Ma Noqotaa Darawal Uber Ma U Qalmaa?
Inaad noqoto Darawal Uber ma tahay Shaqo Wanaagsan?
Immisa ayey Dareewallada Uber Sameeyaan?
Darawalka Uber ma samayn karaa $ 500 maalintii?
Darawalada Uber ma samayn karaan Lix Sawir?
20 -ka Dawladood ee ugu Mushaarka Badan Darawalada Uber
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Darawalada Uber ee ugu mushaarka badan
Uber waxay ku andacoonaysaa in darawalladeeda ay saacad walba ka lacag badan yihiin taksiilayaasha dhaqanka.
Dareewal ahaan, waxaad bilaabi kartaa safarkaaga adoo u soo dejinaya barnaamijka darawalka Uber taleefankaaga casriga ah oo aad shiddo habka darawalka. Sidoo kale qasab ma aha in aad 24 -ka saac online ahaan joogto, toddoba maalmood toddobaadkii.
Dad badan ayaa noqda darawalada Uber sababta oo ah waxay leeyihiin baabuur waxayna rabaan inay kaabiyaan dakhligooda iyagoo kaxeeya rakaabka wakhtiga firaaqadooda.
Dabcan, haddii aadan haysan baabuur, weli waxaad noqon kartaa darawal Uber adiga oo kiraynaya mid ka mid ah amaahiyaha Uber-ansixiyey.
Akhri: 10 Baabuurleyda Ugu Lacagta Badan | Shaqooyinka Ugu Fiican
Waxa ugu fiican ee ku kaxaynta Uber waa inaad si buuxda gacanta ugu hayso jadwalkaaga. Looma baahna inaad u shaqayso maalmo ama saacado cayiman sida darawalnimada Uber.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso markaad diyaar u tahay inaad shaqeyso waa inaad daartaa barnaamijkaaga casriga ah oo aad sugto hawl. Markaad dhammayso shaqada ama aad u baahan tahay inaad nasato, waxaad damisaa abka si aad ugu wargeliso shirkadda inaadan mar dambe diyaar ahayn. Intaas uun baa ku jirta.
Faa'iido kale oo weyn oo ah inaad noqoto darawal Uber ayaa ah inaadan lahayn madax.
Si aad u wadid baabuur, waa inaad buuxisaa shahaadooyinka ugu yar, laakiin intaas ka dib, asal ahaan adiga ayaa iska leh. Ugu dambayntiina, maamulaha kaliya ee ay tahay inaad la macaamisho waa macmiilka aad dooratay.
Marka talooyinka iyo gunnooyinka lagu daro, darawalka Uber wuxuu qaataa celcelis ahaan $ 19.36 saacaddii.
Gunnooyinka la bixiyay coronavirus dartiis ayaa laga yaabaa inay ku xisaabtamaan kala -duwanaanshaha qaarkood.
Waqtiga intiisa badan, Uber waxay siisaa macaamiisha qiimaha caadiga ah, laakiin inta lagu jiro dhacdooyinka mugga badan, “qiimaynta kororka” ayaa la adeegsadaa.
Waxaa laga yaabaa inaad kasbato wax badan saacad kasta oo aad kordhiso qadkaaga hoose adigoo kaxaysanaya dhawr qof oo raacaya qiime sare.
Qiimaynta kacdoonku waa fikrad qallafsan dadka qaarkood, oo xitaa waxay noqon kartaa mid aan la saadaalin karin, inkasta oo ay inta badan ka dhacdo meelaha u dhow dhacdooyinka waaweyn, sida marka dadku yimaadaan ama marka ay dhacdo dhacdo.
Tusaale ahaan, riwaayad weyn oo ay ka soo qaybgalayaashu 50,000 ayaa laga yaabaa inay keento sicir -barar marka boqolaal qof ay ka baxaan dhacdada oo codsadaan baabuur Uber.
Waxaad samayn kartaa lacag aad u badan waqti ka dib haddii aad adigu isu meelayso inaad soo qaadato raacayaasha inta lagu jiro dhacdooyinkaan iyo ka dib.
XIDHIIDHKA: Intee In le'eg ayaan ku Bixin karaa Raashinnada si aan u badbaadiyo Lacag badan
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay jirto qalliin, haddii aad u shaqeyso darawal Uber, waxaa laga yaabaa inaadan waligaa samayn $ 500 hal maalin.
Dakhliga darawalnimada Uber ee waqtiga buuxa waxaa lagu qiyaasay goobaha shaqada sida Indeed.com iyo Glassdoor.com.
Iyada oo ku saleysan 119 mushahar oo lagu daabacay Indeed.com, darawalada Uber oo waqti-buuxa shaqeeya $ 30,478 sanadkii. Iyada oo ku saleysan 146 mushahar oo lagu dhajiyay Glassdoor.com, mushahar buuxa oo buuxa oo ah $ 36,169 sanadkii ayaa la duubay.
Si kastaba ha ahaatee, mareegaha ma aysan shaacin in tani ay ahayd ka hor ama kadib kharashaadkii la xisaabiyey.
Akhri: 15 Ka -qeybgalayaasha Duulimaadka Lacagta Ugu Badan | Diyaaradaha Ugu Fiican
Hoos waxaa ku yaal gobollada leh dakhliga ugu badan ee darawalada Uber
Darawalada Uber ee California waxay kasbadaan $ 23.28 saacaddii, in kasta oo sidii la filayay, qaar ayaa wali sameeya ilaa $ 16.75.
Sababtoo ah baahida weyn ee darawalada iyo xaqiiqda ah inaad ka hawlgeli karto saddex magaalo, California, gobolka ay shirkadda Uber ugu sarreyso liiskayaga.
Halkan, darawaliintu waxay samayn karaan qaar ka mid ah mushaharka saacadda ugu sarreeya. Kani waa mid ka mid ah gobolada darawalada uber oo mushaharkoodu sarreeyo.
Darawalada Uber ee Washington waxay kasbadaan $ 22.67 saacaddii. Tan waxaa sabab u ah cimilada, oo laga yaabo in mararka qaarkood aan la jeclayn, xaqiiqda ah in kharashka wadista baabuurtu uu yahay mid raqiis ah, iyo in mushaharka dadka dabaqadda dhexe ah ay sii kordhayaan.
Washington, DC, waxay ka mid ahayd kuwa ugu horreeya ee oggolaaday in Uber laga qaado garoomada diyaaradaha, taas oo had iyo jeer faa'iido u leh wadayaasha.
Kani waa mid ka mid ah gobolada darawalada uber oo mushaharkoodu sarreeyo.
Darawalada Uber ee New York waxay kasbadaan $ 21.68 saacaddii. New York, dabcan, waxay ku jirtaa liiska, waana magaalada ay darawalada Uber ka helaan lacagta ugu badan saacaddii.
Tartanka, dhinaca kale, wuxuu koray saacadaha dheeraadka ah. Si kastaba ha ahaatee, sababta oo ah kala badh dadka magaalada ayaa adeegsada gaadiidka dadweynaha, tani kama reebayso suurtagalnimada helitaanka rakaab.
Darawalada Uber ee Massachusetts waxay kasbadaan $ 21.39 saacaddii.
In kasta oo ay jiraan arrimo hadda jira oo darawallada Uber ee magaaladan loo aqoonsaday inay yihiin sharci, dakhligu wuxuu noqon karaa mid faa'ido badan leh. Sababtoo ah dad aad u badan oo ku nool Boston Massachusetts, tusaale ahaan, waxay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha, fursadaha lagu raaco gaadiid badan ayaa la kordhiyaa.
Waxaa jira arday aad u badan, badidooduna ma haystaan ​​baabuur, markaa taasi way caawisaa.
Darawalada Uber ee New Jersey waxay gaaraan 20.58 saacadiiba. Kordhinta New Jersey waxay u muuqataa mid aad u yar oo ka daran tii New York.
Tani waxay ka dhigaysaa Uber xitaa mid ka jaban New Jersey marka loo eego tagsi.
Darawalada Uber ee Colorado waxay kasbadaan $ 18.41 saacaddii. Denver, Colorado waa magaalo kale oo hore loo oggolaaday in laga soo qaado gegida dayuuradaha, oo lagu xusay dib-u-dhigisteeda, degganeyaal wanaagsan.
Roob iyo baraf ayaa halkan marti u ah, marka darawaliintu waxay helaan rakaab badan oo aan rabin inay qoyaan.
Darawalada Uber ee Pennsylvania waxay kasbadaan $ 18.17 saacadiiba. Gobolkan, Uber waxay tijaabinaysay barnaamijkeeda madaxbannaan.
Si kastaba ha ahaatee, baabuurtaas is-kaxaynta si weyn looma isticmaalo, iyo darawalada Uber ayaa had iyo jeer si wanaagsan ugu qabta Pennsylvania waqti ka dib.
Tani waa mid ka mid ah gobolada darawalada uber ee ugu mushaarka badan.
Darawalada Uber ee Maryland waxay kasbadaan $ 17.79 saacaddii. Baahida loo qabo raacitaanka Uber ee Baltimore, tusaale ahaan, aad buu u sarreeyaa.
Waxa arrinta ka sii dhigaya mid xiise badan leh ayaa ah in ay jiraan daqiiqado badan oo soo kordhay maalintii oo dhan, taas oo tilmaamaysa haddii aad tahay darawal ganacsi leh, in ganacsigu runtii kobci karo.
XIDHIIDHKA: 10 -ka ugu Fiican Barnaamijyada Scanner HD ee Bilaashka ah ee Dukumiintiyada 2022
Darawalada Uber ee Michigan waxay kasbadaan $ 17.69 saacaddii.
Xayiraado badan oo xagga amniga ah iyo shuruudo ayaa lagu dejiyay Uber iyo darawalladeeda sharciga Michigan si loo hubiyo in Uber ay badbaado u tahay wadayaasha iyo in laga ilaaliyo shilalka baabuurta iyo dambiyada rabshadaha wata ee darawalada Uber, kuwa kale ee fuushan, iyo dambiilayaasha iska dhigaya darawalada Uber. .
Sidaa darteed tani waxay kordhisay adeegsiga Uber ee gobolka.
Waa mid ka mid ah dawladaha dakhligoodu sarreeyo ee darawalada uber.
Akhri: Shaqaalaha korontada ee ugu mushaarka badan USA | 10 Dawladood ee Ugu Fiican
Darawalada Uber ee Illinois waxay kasbadaan $ 17.52 saacaddii. Sababtoo ah qiimaha hoose ee nolosha ee Illinois, Uber ayaa laga doorbiday taksiyada dhaqanka.
Dabcan, taraafikada Chicago iyo magaalooyinka kale ee Illinois ayaa ku siin kara xanuun, laakiin dhammaan lacagta qofku samayn doono, ayaa bixin doonta.
Darawalada Uber ee Arizona waxay kasbadaan $ 17.38 saacaddii.
In kasta oo laga yaabo inaysan u muuqan marka ugu horeysa, darawalada Uber ee Arizona waxay ka lacag badan yihiin dhiggooda magaalooyin badan oo la aasaasay.
Sida laga soo xigtay cilmibaaris, dakhliga caadiga ah ee gobolkan wuxuu ka sarreeyaa kuwa magaalooyinka kale oo badan oo isku cabbir iyo dad la mid ah.
Darawalada Uber ee Texas waxay gaaraan 17.37 saacaddii.
Austin, Texas waa aag weyn oo loogu shaqeeyo darawal Uber sababta oo ah qiimaheeda gaaska oo hooseeya iyo dad badan oo dhalinyaro ah.
Caymiska baabuurka ayaa sidoo kale qiimahoodu macquul yahay, markaa midna uma baahna inuu jebiyo bangiga si uu u daboolo kharashkooda. Texas sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa xaflado muusig oo aad u weyn, markaa ka filan ganacsigaagu inuu kobco inta lagu jiro wakhtigaas.
Kani waa mid ka mid ah gobolada ugu dakhliga badan darawalada uber.
Darawalada Uber ee Missouri waxay kasbadaan $ 17.24 saacadiiba.
Waxaa la ogaaday in qiyaastii rubuc ka mid ah waddooyinka Missouri ay xaaladdoodu liidato, oo ay darawallada ku kacaan celcelis ahaan $ 699 sanad walba.
Godadku waxay ahaayeen walaaca wadista ee ugu badan, sida laga soo xigtay KCTV5 News. Waxay si gaar ah uga xun yihiin jiilaalka daran.
Darawalada Uber ee Nevada waxay kasbadaan $ 15.77 saacaddii. Nevada, sida magaalo kasta oo kale oo weyn, waxay la il daran tahay ciriiriga taraafikada.
Waqtiyada gaarka ah ee maalinta, waddooyinka waaweyn iyo qaybaha magaalada way adkaan karaan.
Markaan idhaahdo, isu socodka Nevada meelna ugama dhowa sida daran Los Angeles ama magaalooyinka kale ee ciriiriga ah.
Kani waa mid ka mid ah gobolada darawalada uber ee ugu mushaarka badan.
Darawalada Uber ee North Carolina waxay kasbadaan $ 15.33 saacaddii. Sida laga soo xigtay cilmi -baaris cusub, North Carolina waxay ku jirtaa kaalinta 20aad ee dalka darawalada xun.
Sababtaas awgeed, dad badan oo rakaab ah ayaa hadda ku tiirsan Uber si wadid ammaan leh. Tani macnaheedu waa ganacsi ka wanaagsan darawalada Uber.
Darawalada Uber ee Oklahoma waxay kasbadaan $ 14.93 saacaddii. Waa ikhtiyaar fudud, sida ay qabaan wadayaasha mootooyinka caadiga ah.
Dhab ahaantii, way ka fiican tahay taksi sababtoo ah ku -habboonaanta.
Caadi ahaan, qiimaha raacitaanku wuxuu u dhexeeyaa $ 8 illaa $ 15.
Tani waa mid ka mid ah gobolada leh darawalada uber ee ugu mushaarka badan.
Darawalada Uber ee Florida waxay kasbadaan $ 14.81 saacaddii. In kasta oo cimilada magaaladani ay tahay mid wanaagsan, haddana waxaad awoodi doontaa inaad hesho tiro rakaab ah darawal Uber ahaan.
Sababtoo ah waxaa halkan jooga dalxiisayaal badan oo aan aqoon jidkooda magaalada, qofku wuxuu filan karaa inuu nolol wanaagsan ku sameeyo isagoo kaxeeya.
Darawalada Uber ee Indiana waxay kasbadaan $ 14.70 saacaddii.
XIDHIIDHKA: Waa Kuma Ciyaartoyga NBA-da Lacagaha Ugu Badan?
Heerka ciriiriga ee Indianapolis waa 11%, taas oo macnaheedu yahay darawalada waa inay filayaan inay waqti intaas ka badan ku qaataan wadada inta lagu jiro saacadaha degdegga ah.
Marka loo eego tusmada, tani waxay u dhigantaa 15 daqiiqo oo dheeri ah maalintii ama 58 saacadood sanadkiiba.
Darawalada Uber ee Tennessee waxay kasbadaan $ 14.47 saacaddii. In kasta oo Tennessee ay ku leedahay sumcad dib-u-dhigid, soo dhawayn magaalo, booqdayaal badan oo markii ugu horraysay la yaaban gaadiidka waaweyn ee magaalada.
Caqabadaha taraafikada, jabaqda, iyo gaabisku ma aha wax aan caadi ahayn, gaar ahaan saacadaha degdegga ah ee subaxdii iyo galabtii.
Darawalada Uber ee Ohio waxay kasbadaan $ 14.45 saacaddii. Sida laga soo xigtay Dispatch, Ohio waxay leedahay heerka labaad ee ugu sarreeya hakinta liisanka darawalnimada qofkiiba dalka.
Waxa kale oo ay leedahay qaar ka mid ah darawalada ugu xun dalka. Kani waa mid ka mid ah gobolada darawalada uber oo mushaharkoodu sarreeyo.
Akhri: 15 Injineerada Aerospace ee ugu Sarreeya Lacagta | Dalalka Ugu Fiican
Intee in le'eg ayay sameeyaan darawalada Uber?
In kasta oo ay jiraan kala duwanaansho badan, inta badan darawalada Uber waxay kasbadaan inta u dhaxaysa $ 15 iyo $ 20 saacaddii. Kuwa kaxeeya waqtiyada iyo meelaha ugu faa'iidada badan, macaashkoodu inta badan wuu sarreeyaa. Baabuur wadista fiidka Jimcaha iyo Sabtida, iyo sidoo kale inta lagu jiro fasaxyada waaweyn sida Halloween iyo Habeenka Sannadka Cusub, ayaa laga yaabaa inay ku kasbato lacag aad u badan.
Waa maxay faa'iidada ugu weyn ee wadista Uber?
Uber waa, shaki la'aan, shaqada ugu habboon ee adduunka. Waxaad si buuxda gacanta ugu haysaa goorta iyo sida aad u isticmaasho abka. Waxaad samayn kartaa inta ugu badan ama in yar oo aad raacdo marka aad internetka gasho. Midna kuma fekeri karo shaqo kasta oo adduunka ku siisa xorriyadda intaas le’eg. Marka darawalada la su'aalo, mid ka mid ah sababaha ugu sarreeya ee ay ku andacoodaan inay Uber u shaqeeyaan waa dabacsanaanta.
Waa maxay khasaaraha ugu weyn ee wadista Uber?
Sababtoo ah darawalada ayaa iskood u shaqeysta, waa inay wax ka qabtaan arrimaha sida raadinta masaafada, caymiska rideshare, iyo canshuuraha kaligood. Si kastaba ha ahaatee, shirkado badan ayaa diyaar u ah inay ka caawiyaan darawalada adeegyada ay ka midka yihiin raadinta masaafada lacag la'aanta ah.
Maxaan u baahanahay si aan u bilaabo wadista Uber?
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa baabuur iyo casriga. Waxaad ka codsan kartaa Uber khadka tooska ah oo si dhakhso leh u dhammaystir baaritaankaaga asalka ah. Xitaa haddii aadan lahayn baabuur, Uber hadda waxay leedahay kirada rideshare iyo beddelaad kiro ah oo si aad ah u dabacsan oo ay ku jiraan masaafada aan xadidnayn.
Sidoo kale ma u wadi karaa Lyft darawal Uber?
Waxaad u wadi kartaa labada Uber iyo Lyft maxaa yeelay darawalada Uber waa qandaraaslayaal madaxbannaan. Darawalo badan oo caqli badan ayaa ku biira labada adeeg si ay uga faa'iidaystaan ​​gunooyinka is-qoritaanka iyagoo waliba dakhligooda kala duway.
Soo saaritaanku ma daboolayaa darawalada Uber?
J: Haddii aad baabuurkaaga u isticmaasho Uber, caymiskaaga baabuurka ee gaarka ahi kuuma daboolayo. Si kastaba ha ahaatee, ikhtiyaarrada cusub ee 'caymiska rideshare' ayaa la soo saaraa maalin kasta. Siyaasadahaasi waxoogaa way ka qaalisan yihiin, laakiin waxay bixiyaan caymis buuxa.
Ku shaqaynta darawalnimada waxay tixgelin weyn u yeelan kartaa dakhli dheeraad ah kuwa leh baabuur iyo haddii kaleba.
Ahaanshaha darawal Uber ayaa sidoo kale loo qaadan karaa shaqo waqti-buuxa ah haddii qofku rabo.
Dabacsanaanta shaqadu bixiso iyo xaqiiqda ah in darawalku go'aansan karo mushaharkiisa ayaa ah casho ee soo jiidashada ugu sareysa ee noqoshada darawalka Uber, iyada oo aan la tixgelin talooyin dheeraad ah iyo fursadda haddii lala kulmo dad cusub.
Sida Guri Loo Badbaadiyo: 15 Siyadood Oo Shaqeeya
Maxay yihiin Takhasusyada Dhakhtarka ugu Mushaharka Badan 2022? | Xirfadaha ugu Fiican
Maxay ka dhigan tahay Marka Bisaddu nadiifiso? 15 Xaqiiqooyin Ku Saabsan Luuqadda Jacaylka Bisadda
Maxaa loola jeedaa marka bisadu dhogorto? Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in nadiifintu ay gabi ahaanba caadi tahay…
Sida Loo Doorto Midabada Rinjiga ee Gurigaaga
Barashada sida loo doorto midabada rinjiga ee gudahaaga ma aha wax fudud. Maqaalkan, waxaan ku socdaa…
10ka Doorasho ee ugu Wanaagsan Albaabada Xiritaanka
Qolka jiifka, armaajodu waa meesha ugu muhiimsan ee kaydinta. Sababtoo ah tani waa meesha aad ku ilaalinayso…